Fikambanan'izao rehetra izao tsy misy elasticité miharihary amin'ny lalan'ny torsion. Izy io dia azo zaraina amin'ny fiaraha-miombon'antoka iraisam-pirenena tsy mitovy, fiaraha-miombon'antoka iraisam-pirenena quasi-constant ary iombonana iraisana tsy tapaka.  ① Firaisan'ny rehetra tsy mitovy. Rehefa lehibe kokoa ny zoro eo anelanelan'ny famaky roa mifandray amin'ny fitambaran'ny rehetra...
HANGZHOU SPEEDWAY IMPORT & EXPORT dia orinasa matihanina amin'ny fanondranana ampahan-tsofa sy ampahany hafa.
Inona no atao hoe shaft drive? Drive shaft no singa fototra amin'ny fifindran'ny hery amin'ny fitaovana fifindran'ny rehetra. Ny fifindrana dia matetika mifandray amin'ny axle mitondra fiara, na ao amin'ny axle familiana fiara sy axle fizarazarana, amin'ny kodiaran'ny differential sy ny fiara. Ny tobin'ny kamiao fambolena ...
Amin'ny taona 2050, ny fiara elektrika dia hanjaka amin'ny varotra fiara
Araka ny filazan'i Wood Mackenzie, ho 875 tapitrisa ny fiara mpandeha elektrika, 70 tapitrisa fiara ara-barotra elektrika ary 5 tapitrisa fiara mandeha amin'ny solika eny an-dalana amin'ny 2050. Amin'ny tapaky ny taonjato dia hahatratra ny totalin'ny fiara tsy misy emission miasa. 950 tapitrisa. Wood McKe...
Inona no tokony hojerena amin’ny fampiasana sy fikojakojana ny mpanety vary?
nataon'ny admin tamin'ny 21-06-28
Ny mpamboly vary dia milina fambolen-kazo mamindra ny zana-bary eny amin’ny tanimbary. Ny asany dia ny manatsara ny fahombiazan'ny asa sy ny kalitaon'ny famafazana zana-bary, ny fambolen-kazo akaiky, ary ny fanamorana ny mekanika amin'ny asa fanaraha-maso. Mialoha ny fandidiana...
Lehibe ny mety amin'ny famokarana: mihoatra ny 90% amin'ny fanondranana dia entana vita
nataon'ny admin tamin'ny 21-06-20
Avy amin'ny indostrian'ny indostria mahantra ka hatramin'ny rafitra maoderina feno, manomboka amin'ny famokarana afokasoka sy savony fotsiny ka hatramin'ny fiara handeha any ivelany, manomboka amin'ny teknolojia manaraka ny fanavaozana maka ny teknolojia mitarika fanavaozana mahaleo tena…